Payraise Calculator AJAX Shanduro yakakwira! | Martech Zone
Svondo, October 1, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
kushanya Payraise Calculator
Unogara uchiziva pandinonyangarika kwemazuva akati wandei - zvinoreva kuti ndiri kutora yakawanda yecaffeine uye nekuronga huropi hwangu kunze. Imwe yemapurojekiti ekutanga andakambove nawo kuronga chirongwa chevashandi kuita muMicrosoft Access 2.0! Chinhu chandakawedzera kwachiri (sezvo dhipatimendi redu reHR raida kuti zvese zviyero zvizadziswe) yaive yekuwedzera mubhadharo karitori. Ini ndakazvigadzira sechimiro mune dhatabhesi uye mhedzisiro yakadhindwa mumushumo.
Ini ndakavaka saiti iyi kubva pakutanga kushandisa Dreamweaver (ini ndiri ol 'chikoro notepad mukomana ... asi ndakafunga kuzvipfura). Ndakaita iwo maficha muIllustrator. Ini ndakashandisa CSS yekumberi-kumagumo 100%, uye kunyangwe uine Printa CSS vhezheni (enda kumberi upurure zvawanikwa kunze uye uchaona). Iyo yekumberi magumo yakafuridzirwa ne37Signals… yakanaka uye yakapusa, asi diki inoyevedza. Ndichine mhedzisiro inoratidza mutafura - asi izvi ndezvinangwa nekuti ini ndoda kuti vanhu vakwanise kuteedzera nekunamatira mhedzisiro muExcel kana chero imwe pogram. Pane zvakawanda zvakashambidzika zvidiki zvishoma pamusoro pekushandisa. Ndinovimba unoifarira!
Ive neshuwa yekumhan'arira chero bugs kwandiri! Nhanho inotevera inosanganisa injini yekutsvaga yaJob ichishandisa Chokwadi yekupedzisira-kumagumo. Pamwe vhiki rinotevera!
Biriyoni rimwe chete reMadhora eYouTube? Pamwe.